January 25, 2021 600
काठमाडौँ । कुर्कुच्चा फुटेर बाक्लो अनि कडा सेतो छालाको लेउ लाग्ने समस्याले अधिकांशलाई सताइरहेको हुन्छ। वृद्धवृद्धाहरूलाई मात्रै नभएर युवा तथा प्रौढहरूमा पनि यस्तो समस्या आउन सक्दछ।
सबैले यसलाई ‘कुर्कुच्चा फुटेको’ भन्छन्, तर खासमा यो ‘फुटेको’ होइन। यहि नै शरीरको प्रतिरक्षा प्रणाली हो। तर यसलाई बेलैमा सफा नगरे, यसले विकराल रूप लिन सक्छ र निको नहुने गरी त्यहिँ टाँस्सिएर बस्न सक्छ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
Prevकपालमा चायाँ लठ्ठिएर दिक्क हुनुभएको छ ? छुटकारा पाउन यी घरेलु उपायहरु अपनाउनुहोस् !
Nextबिबाह भएको पुरुषसँग किन आकर्षित हुन्छन युवतीहरु ? यस्ता छन कारणहरु !